မီးအလင်း မှအကောင်းဆုံး မီးအလင်း မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ပေါက်ကွဲမှုအထောက်အထား LED အလင်းများ
အမြင့်ဂလားပင်လယ်အော် Lights LED
အဏ္ဏဝါ LED မီး
RGB LED မီးများ
ကျနော်တို့ကနေတင်ပို့သူများမှာ Taiwan ချမှတ် မီးအလင်း။ ၎င်း၏အလွန်ကြီးမားသောကုန်သွယ်ရေးအသိပညာနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူကုမ္ပဏီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခုန်ခြင်းနှင့်မှတ်သားလာခဲ့သည်။ "အရည်အသွေး, အရေအတွက် & အချိန်မီပေးပို့ခြင်း" ကြှနျုပျတို့ဆောင်ပုဒ်မှကျူးလွန်ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်လက်လီအရောင်းဆိုင်, ဧည့်ဝတ် & ကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင်ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကျွန်တော်တို့၏အတောင်တို့ကိုချဲ့ထွင်ရန်တတ်နိုင်ကြသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရွဲ, ဖြန့်ဖြူး, ဝယ်လက်, အေးဂျင့်များနှင့် OEM / နှစ်ဖွဲ့မှ Enquiry ကြိုဆိုဖြစ်ကြသည်။
ပုံစံ - H5 SBDL 15° 300-600W
အတိုင်းအတာ:L457x W460x H250mm(15̊ )
အလေးချိန်:၁၉.၄ ကီလိုဂရမ်(ပါဝါအပါအ ၀ င်)
အိမ်ရာ:လူမီနီယမ်အလွိုင်း/လူမီနီယမ်အလွိုင်း fin+သံမဏိ bracket က
Luminous flux LED:100~150 Lm/W(ရိုက်ပါ.5000K)
LED အလင်း Lumens:36000/48000/60000lm(ရိုက်ပါ.5000K)
Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်:IP66(IP68 optional ကို)
Beam Angle:၁၀̊ /15̊ /38̊ /56̊ /95̊ /132̊
အချိုးကျမှန်ဘီလူးပုံစံ(Beam ထောင့်:၁၀/15/38/56/95/132 ဒီဂရီ).
တာရှည်ခံပြီးသက်တမ်းရှည် COB LED အရင်းအမြစ်တွင်ဒီဇိုင်းဆွဲပါ.
သံမဏိ bracket ကိုခိုင်ခံ့စေ,ထောင့်သော့ခတ်ကိရိယာနှင့်အတူ,irradiation ထောင့်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.ledlightfixtures.org/my/spotlight-light.html
သို့: SHINYU LIGHT CO., LTD.
LED Projector အလင်း
အကောင်းဆုံး မီးအလင်း ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် မီးအလင်း ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Spotlight Light	| Spotlight Light	| Spotlight Licht	| Прожектор Свет	| Spotlight Light	| Spotlight Light	| रोशनी	| Luz Del Proyector	| Spotlight-licht	| أضواء كاشفة	| Ánh đèn sân khấu	| แสงสปอตไลท์	| Lampu Sorot	| স্পটলাইট আলো	| Spot Işığı	| スポットライトライト	| 聚光燈	| 聚光灯